Somaliland: Masuuliyiinta Xisbiga UCID Oo La Filayo Inay Todobaadka Fooda Inagu Soo Haya U Gudbiyaan Maxkamada Hargeysa Dacwad Ka Dhan Ah Gudoomiye Faysal Cali Waraabe - Wargane News
Home Somali News Somaliland: Masuuliyiinta Xisbiga UCID Oo La Filayo Inay Todobaadka Fooda Inagu Soo...
Masuuliyiinta xisbiga mucaaradka ah ee UCID gaar ahaana musharaxa madaxwayne ee xisbiga UCID aqoonyahan Jamaal Cali Xuseen iyo gudoomiye ku xigeenka saddexaad ee xisbiga mujaahid Cali Guray ayaa waxa la filayaa inay badhatamaha todobaadka fooda inagu soo haya ay maxkamada magaalada hargeysa u gudbiyaan dacwad ka dhan ah gudoomiyaha xisbiga UCID eng aysal Cali Waraabe.
Warar xog ogaal ah oo ay helayso shabakada Ramaasnews ayaa sheegaya in 9 ama 10 bishan lagu guda jiro ay damacsan yihiin in masuuliyiintani u gudbiyaan dacwada maxkamada hargeysa ee gobolka maroodijeex.
Waxaana dacwada loo gudbinayo maxkamada ay daaran tahay sidii loo kala saari lahaa musharaxa xisbiga UCID aqoonyahan Jamaal Cali Xuseen iyo gudoomiyha xisbiga Faysal Cali Waraabe oo mudooyinkii udanbeeyeyba khilaaf xoogani ka dhex taagnaa.
Khilaafkan ka dhex qarxay labadan masuul ayaa ka danbeeyey kadib markii dhawaan gudoomiye Faysal Cali Waraabe ka dhawaajiyay inaanu ahayn Jamaal Cali Xuseen musharaxa doorashada uga qayb galaya xisbiga mucaaradka ah ee UCId, isaga oo tilmaamay inay ka dhamaatay wakhtigii isla markaana musharax kale ay soo dooranayaan shirwaynaha golaha dhexe.
Musharaxa madaxwayne ee xisbiga UCID aqoonyahan Jamaal Cali Xuseen ayaa isagu dhankiisa ka dhawaajiyay in gudoomiye Faysal uu la tiigsan doono maxkamada isla markaana aanu ka daba hadhay hadaladii kazoo baxyay gudoomiye Faysal ee daraanaa inaanu ahay musharax, waxaana uu Jamaal sheegay in shirwayne lagu soo doortay isla markaana aanay wali ka dhamaan wakhtigii lagu heshiiyay .
Dhanka kale gudoomiye Faysal ayaa isagu sheegay inaanay jirayn dacwad loo gudbin doono maxkamada, balse lagu kala bixi doono sharciga iyo qawaaniinta u yaala xisbiga.
Arinkan ayaa sababay in hadalo eedaymo ah ay warbaahinta isku mariyaan masuuliyiinta xisbiga UCID,waxaana maalinba maalinta ka danbaysa sii kordhaya khilaafka xisbiga UCID, iyada oo dhanka kalena la filayo inay maxkamadu go’aamo kazoo saarto dacwadan ay ku kala xadaynayso labadan masuul,ilaa hadana lama garanyo halka uu sal dhigan doono khilaafkaasi.